एकाविहानै भरतपुरबाट आयो यस्तो खबर, पुन: मतदान हुने सम्भावना बढी, रेणुलाई जिताउन यस्तो रणनीति !
ARCHIVE, POLITICS » एकाविहानै भरतपुरबाट आयो यस्तो खबर, पुन: मतदान हुने सम्भावना बढी, रेणुलाई जिताउन यस्तो रणनीति !
भरतपुर - निर्वाचन आयोगले भरतपुर चितवनको वडा नम्बरमा १९ पुन: मतदान गर्ने शनिबार निर्णय गरेसँगै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले नयाँ रणनीति बनाएको छ । आइतबार राती बसेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको जिल्ला समितिको संयुक्त बैठक र त्यसपछि मध्यरातसम्म बसेका विभिन्न समूहहरुले १९ नम्बर वडामा हुने मतदानमा वडाअध्यक्षसहित सबै पदमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको पूरै प्यानललाई समर्थन गर्ने सहमति गरेको छ । यसैगरी, काँग्रेसले आफ्ना सम्पूर्ण मत मेयरकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहाललाई हाल्ने समझदारी भएको छ ।
वडामा मत साटासाटसँगै मेयरमा कांग्रेस माओवादी केन्द्रकी उम्मेदयर रेणु दाहाललाई जिताउन सहज हुने उनीहरुको योजना छ । १९ नम्बर वडामा माकेबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार खडग गुरुङ, महिला सदस्य बिना गुरुङ, दलित महिला सदस्य शान्ति विश्वकर्मा, सदस्यहरु राजेन्द्र वस्ताकोटी र दुर्गा लामाले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ । सो वडाको मतगणना गर्दा ९० वटा मत च्यातिएको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले शनिबार पुनमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयलाई एमालेले अस्वीकार गरेको छ । एमालेले यो निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भएको छ ।
यता विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुले भने सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन हुने हुनाले पुन: मतदानकै निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय आउने पक्कापक्की भन्दै कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन रेणुलाई जिताउन लागि परेका छन् ।